Iva China 330kV Electric Transmission Line Tower Manufacture uye Factory |XY Tower
transmission tower chimiro chakareba, kazhinji shongwe yesimbi yesimbi, inoshandiswa kutapurirana uye kugovera magetsi.Isu tinopa zvigadzirwa izvi nerubatsiro rwevashandi vanoshingaira vane ruzivo rwakakura mundima iyi.Isu tinoenda kuburikidza yakadzama mutsara ongororo, mamepu enzira, kuona shongwe, chati chimiro uye gwaro rehunyanzvi tichipa zvigadzirwa izvi.
Pamusoro pezvo, tichine yakakura yakagadzirirwa mhando yeshongwe uye sevhisi yedhizaini yekupihwa nepo vatengi vasina kudhirowa.
Product name 330KV Power Transmission tower
Voltage giredhi 220kV/330kV
Yemahara Prototype Tower Assembly Service
Mune zvimwe zviitiko, vatengi vachiri kuda kuita prototype tower assembly kuti ive nechokwadi chekudhirowa uye kugadzirwa kwakanaka.Nekudaro, isu tichiri kupa prototype tower musangano sevhisi yemahara kune vatengi.
• Huwandu hwenhengo yega yega uye mabhaudhi anozonyatsotariswa kubva mubhiri rezvishandiso pakuunganidza prototype;
Chidimbu chese chezvigadzirwa zvedu chakadhindwa zvinoenderana nekudhirowa kwakadzama.Yese kodhi ichaiswa chisimbiso chesimbi pachidimbu chimwe nechimwe.Zvinoenderana nekodhi, vatengi vanonyatsoziva chidimbu chimwe chete ndecherudzi rwupi uye zvikamu.
Zvese zvidimbu zvakaverengerwa zvakanaka uye zvakaputirwa kuburikidza nedhirowa iyo yaigona kuvimbisa kuti hapana kana chidimbu chisipo uye nyore kuiswa.
Zvakapfuura: 220kV Double Loop Transmission Tower
Zvinotevera: 132kV Kaviri Circuit Yakatwasuka Shongwe
220kV tambo yemagetsi
m type shongwe